सर्वो'च्चको फैस'ला लगत्तै एमाले कार्यकर्ता सडकमा उत्रिए, यसरी चर्कि'यो आन्दो'लन ! भिडियो हेर्नुहोस् (सहित कि गलत ? ) - Public 24Khabar
Home News सर्वो’च्चको फैस’ला लगत्तै एमाले कार्यकर्ता सडकमा उत्रिए, यसरी चर्कि’यो आन्दो’लन ! भिडियो...
सर्वो’च्चको फैस’ला लगत्तै एमाले कार्यकर्ता सडकमा उत्रिए, यसरी चर्कि’यो आन्दो’लन ! भिडियो हेर्नुहोस् (सहित कि गलत ? )
उनले भने, ‘संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा र राष्ट्रिय हितको रक्षा आजको ज्वलन्त आवश्यकता बनेको थियो । त्यसकारण म सर्वोच्चको यो फैसिलालाई स्वागत गर्दछु । मेरो तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट र गठबन्धनको तर्फबाट पनि र सम्मानित सर्वोच्च अदालत, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरुलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु ।
उहाँहरुले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उँचो बनाउनुभयो र न्यायालयको गरिमामयलाई पनि उँचो बनाउनुभयो । यसको लागि उहाँहरु बधाईको पात्र हुनुहुन्छ । पटकपटकको संसद विघटन र पटकपटक संविधानमाथि भएको प्रहारबाट आम नेपाली जनता पनि आजित भएको स्थिति थियो ।
त्यसकारण यो आम नेपाली जनताको जीतको रुपमा अगाडि आएको मैले देखेको छु । यो इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण परिघटनाका रुपमा भएको छ । इतिहासले यसलाई सम्मान गरिराख्ने छ ।’
Previous articleभर्खरै माइतिघरमा झन्डै झ*डप : ४८ घण्टा भित्र देउवालाई प्रधा*नमन्त्री बनाउनु भनेपछि सड’कभरि प्रह’री, भिडियो हेर्नुहोस (सहि कि गलत ? )
Next articleमहेश बस्नेत ग’र्जिए अब सडकमा आ’गो बल्छ, आँ’धीबे’हेरी आउँछ | प्रधा’नन्याया’धीशलाई …ल कोच्नु पर्छ: महेश बस्नेत (भिडियो हेर्नुहोस)